သင့် program ကို Shell Scripting သုံး၍ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ - အပိုင်း ၆ | Linux မှ
သင့် program ကို Shell Scripting - အပိုင်း ၈ ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ခေါ်ဆိုရေးသားချက်များ၏စီးရီးအတွက်ယခုအချိန်အထိငါတို့မြင်သောအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ် "Shell Scripting ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏အစီအစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ" အောက်ဖော်ပြပါ module များကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
ROOM ကြီးကြပ်ရေးမှူး validation ကိုမော်ဒယ်
နှစ်ဆ Execution ရှာဖွေရေး MODULE သို့မဟုတ်ပျက်ကွက် execute
အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်မှုပတ်ဝန်းကျင်အဘို့အ Optimization Module
ဒီထုတ်ဝေမှုအသစ်မှာ ဆဌမ (6)အောက်ပါ module ကိုလေ့လာပါမည်။
၎င်း module သည် Operating System ၏ Architecture ပေါ် မူတည်၍ စဉ်းစားရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းအားအတည်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ၍ စီစဉ်ထားသောနောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်မူတည်သည်။
၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများမှာ
# INICIO DEL MODULO DE DETECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL LPI-SB
read -p "Introduzca la Arquitectura de su Sistema Operativo (1 = 32Bit /2= 64Bit): " ARQ
while [[ $ARQ != "1" && $ARQ != "2" ]]
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA NO COINCIDE CON LO SOLICITADO#"
read -p "PRESIONE 1 ó2para continuar: " ARQ
if [[ "$ARQ" == "1" ]]; then
echo "La arquitectura seleccionadas fueron" $ARQ_A "y" $ARQ_B "según sus datos."
if [[ "$ARQ_A" == "$ARQ_DISTRO_COD" ]]; then
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA COINCIDE CON LA DETECTADA #"
echo "# LA ARQUITECTURA POR USTED INDICADA NO COINCIDE CON LA DETECTADA #"
read -p "SI DESEA CANCELAR EL PROCESO HASTA AHORA PRESIONE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CARACTERES: "s" "S" "y" "Y". DE LO CONTRARIO PRESIONE CUALQUIER OTRA TECLA PARA CONTINUAR, RECUERDE QUE TRABAJAR CON LA ARQUITECTURA INCORRECTA PUEDE TRAERLE SERIOS INCONVENIENTES AL LPI-SB PARA TRABAJAR OPTIMAMENTE! : " op
# FINAL DEL MODULO DE DETECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL LPI-SB
ဒီကုဒ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါ module တစ်ခုပြောတာကအသုံးပြုသူဆီကအောက်ပါတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။
သင်၏ Operating System ၏ဗိသုကာပညာကိုရိုက်ထည့်ပါ (1 = 32Bit /2= 64Bit)
ထည့်သွင်းတန်ဖိုးပေါ်မူတည်။ module ကိုအောက်ပါအကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်:
ဒါဟာ 1 သို့မဟုတ်2နှင့်ညီမျှရိုက်ထည့်တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်
အမှု၌၎င်းသည်တန်ဖိုးနှစ်ခုနှင့်မတူညီပါ, အ module တစ်ခုက2လိုအပ်သောတန်ဖိုးများများထဲမှညီမျှသည်အထိဖတ်တောင်းဆိုမှုကိုပြန်လုပ်။ သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းနှင့်ညီမျှဖြစ်ခြင်း၌တည်၏, အဆိုပါ module ကိုအောက်ပါအကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်:
ထည့်သွင်းတန်ဖိုးကိုညီမျှလျှင်, တစ် ၁), ကိန်းရှင်များ $ ARQ_A y $ ARQ_B တန်ဖိုးများနှင့်အတူ configured နေကြသည် x86 y i386 သက်ဆိုင်ရာနှင့်ပါလျှင်, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည် နှစ် ၂ သိမ်းဆည်းထားသောတန်ဖိုးများမှာ - x86_64 y amd64 ။
ထိုအခါ၏တန်ဖိုးနှိုင်းယှဉ် $ ARQ_A နှင့် $ ARQ_DISTRO_COD အဘယ်သူ၏တန်ဖိုး command ကို output ကိုညီမျှ: uname -m ပါယခင်ကအတူတူအစီအစဉ်၏ပတ်ဝန်းကျင် Variables ကို module ထဲမှာ loaded ။
အကယ်၍ တန်ဖိုး ၂ ခုအတူတူပင်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအောက်ပါသတင်းစကားကိုထုတ်ပေးသည် -
အကယ်၍ သင်သည်ယခုအချိန်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုပါကအောက်ပါစာလုံးများအနက်မှမည်သည့်စာကိုမဆိုနှိပ်ပါက - « s »« S »«နှင့်»« Y »။ အခြားအသုံးဝင်သောစာနယ်ဇင်းများသည်မမှန်မကန်သောဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသော LPI-SB သို့အကြီးအကျယ်အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ပြင်းထန်သောအားနည်းချက်များရှိနိုင်ကြောင်းသတိရပါ၊
အကယ်၍ အသုံးပြုသူမှမှန်ကန်သောစာလုံးအချို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါက၊ ပရိုဂရမ်သည်ပိတ်ပြီးမဟုတ်လျှင်အောက်ပါစာကိုထုတ်ပေးပြီးဆက်လက်လည်ပတ်သည် -
LPI-SB SCRIPT သည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မည်သည့်သော့ချက်ကိုမဆိုဖိအားပေးလိမ့်မည်။
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်အင်တာနက်အခြေခံသော (CLOUD) တွင်ဗဟို application များကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်မည်သည့်ပြည်နယ်များ (နိုင်ငံများ) နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ (လူများ) အနိုင်ရနိုင်သနည်း။
ကျနော့်အထူးထင်မြင်ချက်အရ၊ ငါထင်တာက၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုဗဟိုပြုခြင်း၊ တန်ဖိုးရှိသောနှင့်ရှားပါးသောအထူးလူသားအရင်းအမြစ်များအတွက်ဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်နာရီ / လုပ်အားများကိုချွေတာခြင်း မည်သည့်အလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်း၌တည်၏ National Public Administration (APN) ဆင်းရဲပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှ အမြတ်အစွန်း ရှာဖွေရေးကို ဦး တည်သည် ဖြေရှင်းချက်များနှင့် mတိုးတက်မှုများ de ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလည်ပတ်နေသောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုနည်းပါးပြီးခေတ်မီဆန်းပြား။ ပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။(အစိုးရ) နှင့်ပြင်ပမှ (ပြည်သူ / လူ့အဖွဲ့အစည်း) မှထိုပြည်နယ်၏ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများ၏အောင်မြင်မှုကိုပူးတွဲတာ ၀ န်ယူခြင်းအားဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လုံး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆောက်လုပ်ရေး၏မူဘောင်အတွင်းပိုမိုခိုင်မာလာစေခဲ့သည်။ သင်လျှောက်ထားရန်စီစဉ်ထားသောလူမှုနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာစီမံကိန်း။
လက်ရှိအခြေအနေအရကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားရမည် ပြည်နယ်များ (အစိုးရများ) နှင့်ရှာဖွေရေးကြောင်းလိုအပ်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ၎င်းတို့၏တာဝန်အတွက် ထိရောက်မှု, ထိရောက်မှု, မြင်နိုင်ခြင်းနှင့်လူသိရှင်ကြား (ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆက်သွယ်ရေး) သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပညာရေးနှင့်အထွေထွေအရာအားလုံးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါသည်တည်ရှိနေသောပြproblemsနာများအတွက်အဖြေလည်းဖြစ်သည် အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒများ၏စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေး သောအတွက်လည်ပတ် မည်သည့်အမျိုးသားပြည်နယ်ကိုမဆိုဖွဲ့စည်းသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် optimization နှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖြစ်စဉ်များ အဆိုပါပေးအသစ်သောမော်ဒယ်များဆီသို့ ဦး တည် ၎င်း၏နေထိုင်သူများအဘို့အဘဝအရည်အသွေးမြင့်မား။
အလားတူပင် နိုင်ငံသားများ၏အခန်းကဏ္.ကို ဒါဟာအစမှတဆင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည် ပိုပြီးဝတ္ထုနှင့်ကွဲပြားခြားနားစကားရပ်၏ပုံစံမျိုးစုံ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အစွမ်းထက်၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီး သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများတူတူပါပဲ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ, သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးအတွက်၎င်းတို့၏ APNs အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပတွင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သည်။
ထိုအကောင့်သို့ယူပြီး ဆင်းရဲသောသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, ၏အရေးပါသောလုပ်ငန်းစုကြီးရှိသည် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းအခြေပြုသတင်းအချက်အလက်ငါသူတို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုငါသိ၏ ယူနီဖောင်း (စံသတ်မှတ်ထားသော), အ စီမံကိန်းများနှင့်အကျင့်ကိုကျင့် သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်သောတိုးတက်မှု နိုင်ငံသားများ (နေထိုင်သူ), ဖန်တီးမှု Open Source, အင်တာနက်ပေါ်ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ (Cloud) ကိုအခြေခံသည့်အပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်စနစ်များ (Cloud) အထက်ဖော်ပြပါဒြပ်စင်များကို ဆက်သွယ်၍ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်အစိုးရ၏အယူအဆကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အစိုးရအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းများကိုအာမခံရန်နည်းပညာတိုးတက်မှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Open Source၊ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်အင်တာနက်ကိုသုံးသည် အလွယ်တကူမဆို ပြည်နယ် လုပ်နိုင် ခေတ်မီ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်a အောက်ပါတို့အတွက်အဖြေပေးပါ အခြေခံမေးခွန်းများ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အစိုးရတိုင်းကလုပ်သင့်သည်
နိုင်ငံတော်၏အရင်းအမြစ်များ (ပစ္စည်း၊ နည်းပညာနှင့်လူသား) ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မည်ကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ (ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ) အောင်မြင်ရန်တင်းကျပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များအတွင်းမည်ကဲ့သို့တီထွင်ရမည်နည်း။
¿စိတ်ကျေနပ်မှုတိုးတက်အောင်ဘယ်လို နှင့်အများပြည်သူလေးမွတျ သို့ စီမံခန့်ခွဲမှုသွားပါကောင်းတယ်?
တိုတိုပြောရရင် ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်၊ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ အိုင်စီတီ၏ကောင်းမွန်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်မည်သည့်နိုင်ငံ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမဆိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်စေရန်လွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကောင်းဆုံးလူသားအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူနိုင်ငံသည်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကိုအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သူ့ဟာသူစီမံခန့်ခွဲသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တုန့်ပြန်မှုအချိန်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်နှင့်အရှိန်မြှင့်တင်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » သင့် program ကို Shell Scripting - အပိုင်း ၈ ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တည်ဆောက်ပါ
Squid cache ကို - အပိုင်း 2
Ringtone - GNU / Linux ရှိ Skype အတွက်အစားထိုးတစ်ခု